Ogadentoday Press » RW Itoobiya oo ka hadlay, Cabdi Maxamud Cumar iyo Hubka dhigista Ururada
OTP- Ra’iisul Wasaraaha Itoobiya Abiye Axmed ayaa xalay shir-saxaafadeed ku qabtay Magaalada Addis Ababa waxaana la waydiiyay arrimo baddan oo ku saabsan xaalada Dalka.
Warbaahinta ayaa su,aallo baddan waydiiyay waxaana ka mid ahaa su,aalahaas, Madaxweynaha horre ee Kililka Cabdi Maxamud Cumar oo hadda Aqal maxbuus ku ah Magaalada Addis Ababa, Xaalada Ururadda hubaysan, Internetka sababta loo jaray.
RW ayaa sheegay in Arrinta Madaxweynihii horre ee Kililka Cabdi Maxamud Cumar u talla Sharciga Itoobiya, wuxuuna sheegay in Gobalka arrimo baddan ka dhaceen, Isagoo dhanka Maxaabiista ku tilmaamay inay ahaayeen kuwa isku meel lagula xareeyay Libaaxyo, Dhurwaayo si nafsiyan loo dilo.
Su,aalaha la waydiiyay waxaa kalloo ka mid ahaa, hub baddan oon sharci ahayn oo yaalla wadanka gaar ahaan Gobalka Oromiya oo ururadda nabada qaatay haystaan ayuu sheegay in hub ka dhigis lagu samayn doonaa isla markaasna nidaamka dalka raaci doonaan, haddaba arrintan ayaa ah mid xasaasi ah oo Oromo aysan ogolayn in hubka laga dhigo midaas noqon doonta caqabad weyn. Qoomiyadda Axmaarada ayaa iyagaa la filayaa in hub ka dhigis lagu sameeyo.
Dhanka kalle, Internet ayuu sheegay in sababta u weyn u jireen tahay in ay isku dayayeen inay bad-baadiyeen nolosha dadka maadaamo carqlado dhanka media ah jiraan oo dhalinyraddaa khatar galinayay